IPHEPHA LOKUPHAKATHI KWIPlastiki - UKUKHULA, UKUHLAWULA, NOKUSEBENZA (2020 - 2025)
Imakethi yokupakisha yeplastiki yayixabise i-USD 345.91 yezigidigidi ngo-2019 kwaye kulindeleke ukuba ifikelele kwixabiso le-USD 426.47 yezigidigidi ngo-2025, kwi-CAGR ye-3.47% kwixesha eliqikelelweyo, i-2020-2025. Xa kuthelekiswa nezinye iimveliso zokupakisha, abathengi babonakalise ukutyekela okwandayo kwimpahla yeplastiki ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukupakisha ukuPhononongwa kwe-2019 uphononongo: Iiplastikhi zisiya phambili kubaceli mngeni abasekwe kwifayibha
Ixesha Post: Jul-27-2020
I-9 Sep 2019-Idrive yokonyusa uzinzo kwindalo esingqongileyo ekupakisheni iphinde yabangaphezulu kwi-ajenda yokuPakisha izinto ezintsha eLondon, e-UK. Inkxalabo yabucala nasesidlangalaleni yokunyuka kokungcoliseka kweplastiki kwihlabathi kukhuthaze amanyathelo okulawula, urhulumente wase-UK emiselwe ...Funda ngokugqithisileyo »
Iplastiki zizinto ezinoluhlu oluluhlu olubanzi lwezinto zokudibanisa okanye zokwenza izinto eziphilayo ezinokuthambeka kwaye ke zinokuxonxwa kwizinto eziqinileyo. Iplastiki yipropathi ngokubanzi yazo zonke izinto ezinokuthi zikhubazeke ngokungenakuphikiswa ngaphandle kokophula kodwa, kudidi lwepolym ebumbekayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Iindlela zokuPakisha zePlastiki zika-2020
UBhishophu uChroma Colour u-Beall uxoxa ngezimvo zakhe malunga neendlela eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe kuphuhliso lweplastikhi yokuqhubela phambili. .Funda ngokugqithisileyo »
Ukuphinda ucingisise ukupakishwa kweplastiki-kuqoqosho olujikelezayo
Ukupakishwa kweplastikhi: ingxaki ekhulayo Nciphisa, phinda usisebenzise, ​​phinda usebenzise i-9% yeeplastikhi zokupakisha kwihlabathi liphela ziphinda zisetyenziswe kwakhona. Yonke imizuzu ilingana nelori enye yenkunkuma yokuvuza kweplastiki kwimilambo nakwimilambo, ekugqibeleni iphelela elwandle. Kuqikelelwa kwizigidi ezili-100 zezilwanyana zaselwandle ezifa minyaka le ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuqhutywa kweMpembelelo yokuShukuma okuSimahla kwePlastiki kunye nokuYilwa kweMveliso
Impembelelo yokuHamba kwePlastikhi kweMpembelelo yokuPakisha kunye nokuYila kweMveliso kunye noyilo lweemveliso ziyimfuneko kubathengi njengoko sisazi. Fumanisa ukuba intshukumo engenasiseko seplastikhi iyidala njani inguqu kwindlela iimveliso eziboniswa ngayo, ezenziwe ngayo nezilahlwa ngayo. Ngalo lonke ixesha ungena kwintengiso ...Funda ngokugqithisileyo »
Amagqabantshintshi noKwenziwa ngokutsha kwezinto ebesezisetyenzisiwe
Ukurisayikilishwa kweplastikhi kubhekisele kwinkqubo yokufumana inkunkuma okanye izinto ezilahliweyo zeplastiki kunye nokuphinda kwenziwe ezo zinto zibe yimveliso esebenzayo kunye neluncedo. Lo msebenzi waziwa njengenkqubo yokurisayikilisha kweplastiki. Injongo yokurisayikilisha zeplastiki ukunciphisa amaqondo aphezulu ungcoliseko lweplastiki ngelixa ubeka ngaphantsi p ...Funda ngokugqithisileyo »